कांग्रेसमा एक स्वर : देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार – Suchana Sanjal
कांग्रेसमा एक स्वर : देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण २८, २०७७ समय: २२:०४:१३
नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले एकस्वरमा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल थाल्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।
तर सरकार गठनमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को अन्तरिक मतभेदलाई देखाएर देउवाले अझै आँट गरेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि सरकारका लागि जोडघटाउ सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार टिकाउन जसपाको साथ खोजेका छन् भने माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले इतरको सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको
तर ‘वेटिङ इन प्राइमिनिस्टर’ भनिने विपक्षी दलका नेता देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्न रुची देखाएका छैनन् । यही कारण जसपा, ओलीतिर जानसक्ने विश्लेषण गर्दै कांग्रेस शीर्ष नेताहरुले एक स्वरमा सरकारको नेतृत्व लिने पहल थाल्न आग्रह गरेका हुन् ।
देउवाकै निवास बुढानीलकण्ठमा शुक्रबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकमा नेताहरुले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल थाल्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘तपाईं अगाडि बढ्नुस्, सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि भन्नुस्, हामी तय छौं’ बैठकमा सहभागी पौडेल पक्षीय एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
बुढानीलकण्ठ जानुअघि पौडेल पक्षीय नेताहरुको बैठक महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवास, महाराजगञ्जमा बसेको थियो । त्यही छलफलले सरकारको नेतृत्वका लागि पहल गर्न सभापतिलाई आग्रह गर्ने साझा धारणा बनाएको थियो ।
त्यहाँ जसपाले अघि सारेका शर्तबारे समेत छलफल भएको थियो । नेताहरुका अनुसार संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने जसपाको शर्तमा कांग्रेसले यसअघि सहमति जनाएको थियो ।
२०७४ को चुनावअघि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसदमा लगेको पनि थियो ।
रेमश चौधरीको रिहाइको सन्दर्भमा भने कांग्रेस बोलेको छैन । तर प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली सहमत हुनसक्छन् भने कांग्रेस नहुनुपर्ने कारण नभएको नेताहरु बताउँछन् ।
‘जसपाले कांग्रेस नमानेका कारण एमालेतिर गयौं भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्न’ एक नेता भन्छन्, ‘जसपाले उठाएका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्ने सहमति गरेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्छ ।’
केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव नगर्ने भएकाले पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अधिकांश नेताहरुको धारणा थियो ।
महामन्त्री निवासमा भएको भेलामा अनुपस्थित कृष्णप्रसाद सिटौला पदाधिकारी बैठकमा उपस्थित थिए । उनले पनि कांग्रेसले सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल लिनुपर्ने र जसपाका माग सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेताहरुले एक स्वरमा सरकारको नेतृत्व लिने पहल लिन आग्रह गरिरहँदा पनि देउवा धेरै उत्साहित नदेखिएको एक नेताले बताए । सरकार गठनबारे जसपामा दुई मत रहेको र एउटै निर्णयमा पुग्नसक्छन् भन्ने नभएको उनले बताएका छन् ।
जसपासँग वार्ता कति सकारात्मक ?
पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठक लगतै कांग्रेस शीर्ष नेताहरुले जसपा शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
कांग्रेस नेताहरुसँग छलफल गर्न जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र अशोक राई बूढानीलकण्ठमा पुगेका थिए ।
जसपा नेताहरुले सत्ता सहयात्राका लागि रेशम चौधरीलगायतका बन्दीहरुको रिहाई, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन आफूहरुको भएको बताए ।
यद्यपि बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरु प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई विदा गरिहालौं भन्ने पक्षमा देखिएका छन् भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले एजेण्डा संबोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आफूहरुको मुद्दाबारे एमालेसँग कुराकानी गरिसकेको र छिट्टै माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग पनि सम्वाद गर्ने उनीहरुले बताए ।
कांग्रेस शीर्ष नेताहरुले भने जसपा–माओवादी केन्द्र वार्तापछि फेरि सम्वाद गर्ने वचन दिएका छन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्ने र कांग्रेस–माओवादी–जसपाको गठबन्धन बनाउनु उचित हुने धारणा आएको बताए । ‘ठोस रुपमा हामी यो टुंगोमा पुगेका छौं भनेर भनिहाल्ने बेला भएको छैन’ उनले भने ।
भेटपछि जसपा अध्यक्ष ठाकुरले पनि आफूहरुको एजेण्डा राखेको, तर कुनै सहमति भइनसकेको बताए । कांग्रेससँग समग्र विषयमा छलफल भएको भन्दै उनले भने, ‘हामीले आफ्नो एजेण्डा राखेका छौं । तर केही सहमति भएको छैन ।’
Last Updated on: March 12th, 2021 at 10:04 pm